खेलकुद – Krazy NepaL
“चर्चित फुटबल खेलाडी म्याराडोनाको हृ’दयाघातका कारण मृ’त्यु”
विश्वकै सर्वकालिक महान् फुटबल खेलाडी डियगो म्याराडोनाको ६० वर्षको उमेरमा बुधबार नि’धन भएको छ। पूर्व अ’र्जेन्टिनी आ’क्रामक मि’डफिल्डर तथा प्रशिक्षक म्याराडोनाको घरमै रहेका बेला हृ’दयाघातका कारण नि’धन भएको हो। उनी यसअघि पनि म’स्तिष्कसम्बन्धी स’मस्याबाट बि’रामी थिए। दुई हप्ताअघि मात्रै म्याराडोना म’स्तिष्कमा ब्ल’ट क्ल’ट स’र्जरीपछि अस्पतालबाट डि’स्चार्ज भएका थिए। विश्वका एक महान खेलाडी म्याराडोनाको क’प्तानीमा अर्जेन्टिनाले १९८६ को विश्वकप जि’तेको थियो। उनले खेल जीवनमा शृं’खलावद्ध रुपमा उत्कृष्ट प्र’दर्शन गरेका थिए। आफ्नो फुटबल क्लब करिअरमा उनले बार्सिलोना र नेपोलीबाट खेले। नेपोलीबाट उनले दुई सि’री ए’को उपाधि समेत जितेका थिए। सन् १९६० अक्टोबर ३०मा उनको जन्म भएको थियो ।म्याराडोनाले अर्जेन्टिनाका लागि ९१ खेल खेल्दै ३४ गो’ल गरेका छन। अर्जेन्टिनाबाट उनले चारवटा विश्वकप खेलेका थिए। सन् १९९० को वि
IPL २०२० को उपाधी मुम्बई इन्डियन्सले जित्यो !
मुम्बई -इन्डियन्सले जित्यो IPL २०२० को उपाधी ! हेर्नुहोस विवरण सहित । कार्तिक २५ , काठमाडौं । दुबईमा जारी इन्डियन प्रीमियर लिग आइपिएल मा साविक बिजेता मुम्बई इन्डियन्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाइ ५ विकेट ले पराजित गर्दै २०२० को आइपिएल उपाधी जितेको हो । मुम्बई लाई जिताउनमा क्याप्टेन रोहित शर्मा को मुख्य भुमिका रह्यो । उनले ५१ बलमा ६८ रन जोडेर टिमलाइ जित तर्फ डोर्‍याएका थिए ।
एजेन्सी: इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल' २०२० का सबै खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सको बेन्चमा बसेका नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेले आइतबार दोस्रो क्वालिफायरमा सनराइजर्स हैदराबादविरुद्ध खेल्ने सम्भावना रहेको छ । दिल्लीले आइतबार साँझ दोस्रो क्वालिफायरमा हैदराबादसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । पहिलो क्वालिफायरमा मुम्बई इन्डियन्ससँग ५७ रनले पराजित हुँदा दिल्लीका ब्याट्सम्यान र बलर दुबैले कमजोर प्रर्दशन गरेका थिए । दिल्लीले लिग चरणका १४ र पहिलो क्वालिफायर गरि कुल १५ खेल खेलि सक्दा सन्दीप भने बेन्चमा रहँदै आएका छन् । पहिलो पटक फाइनलमा पुग्ने लक्ष्य राखेको दिल्लीले आज टोलीमा केहि परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ । चार विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने नियम र कमजोर भारतीय तीव्र गतिका बलर हुँदा सन्दीपले दिल्लीमा मौका पाउन सकि रहेका छैनन् । कमजोर भारतीय बलिङकै कारण दिल्लीले पछिल्ला दुई खेलमा तीन विदेशी तीव्र गतिका बलर
आईपीएलमा बलियो मुम्बईलाई हराउदै हैदरावाद प्लेअफमा
अबुधाबी — सूर्यकुमार यादवको ७९ रनबाट प्रेरित मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा बुधबार रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरलाई ५ विकेटले पराजित गरी प्लेअफमा स्थान लगभग पक्का गरेको छ । राम्रो सुरुआत गरे पनि टस हारेपछि ब्याटिङमा आएको बेंग्लोरले अबुधाबी स्थित शेख जायेद रंगशालामा १६४–४ को स्कोरमात्र बनाउन सकेको थियो । ४३ बल खेलेका यादवले १० चौका र ३ छक्का प्रहार गरेपछि मुम्बईले ५ बल अगाडि नै लक्ष्य पूरा गर्‍यो । १२ खेलमा आठौं विजय हात पारेसँगै मुम्बईले प्लेअफमा स्थान बलियो पनि भएको छ । मुम्बई हाल शीर्ष स्थानमा रहेको छ । शीर्ष चार स्थानमा रहने टोली प्लेअफमा पुग्ने प्रावधान छ । त्यसमा पहिलो दुई स्थानमा रहने टोलीले क्वालिफायर १ मा खेल्ने छ र विजेता टोली फाइनलमा पुग्ने छ । पराजित हुने टोलीले तेस्रो र चौथो बीचको विजेतासँग फाइनलमा स्थान पाउन खेल्ने छ । बेंग